हेर्नुहोस् विष्णु माझी’ले २ लाख पा’रिश्रमिक लिनु’को भित्रि का’रण (भि’डियो)
March 2, 2020 998
विष्णु माझीको स्वरमा सजिएको यो गीत युट्युबबा’ट अहिलेसम्म साढे ५ करो’डले हेरि’सकेका छन् । लालुमाईमा उनै विष्णु माझी र सन्दीप न्यौपानेको स्वर छ । सो गीत’लाई युट्युबमा खोज्नेको संख्या २ करो’ड ६५ लाखभन्दा बढी देखिन्छ ।
छिपछिपे पानीमा लेऊ बोलको गीत’मा समेत उनै विष्णुको स्वर छ । यो गीतलाई झण्डै ७८ लाखले हेरिस’केका छन् । वसन्त थापा र विष्णु माझीको स्वर रहेको बोके’झारलाई झण्डै ७८ ला’ख हाराहा’रीले हेरेका छन् । हेमन्त शर्मा र विष्णुको स्वर रहेको मन मा¥यो बनमाराले बोलको गीत युट्यु’बमा साढे ३४ लाखले हेरेको देखिन्छ ।
दुई साताअघि मात्र बजा’रमा ल्याइएको गैरीखेतमै गीतमा उनै विष्णु र रोशन गैरेको स्वर छ ।जसलाई १५ ला’खले हेरि’सकेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, करो’डौं नेपालीकी प्रिय लोकदो’होरी गायिका विष्णु माझी कहाँ गुम’नाम छिन् र किन देखि’न्नन् !
कतै सार्व’जनिक कार्यक्रममा साथै विष्णुको स्वर नसुन्ने त विरलै होलान् तर उनको भूमि’गत जिन्दगीबारे कमै’लाई थाहा हुन सक्छ । हेर्नुहोस् भिडि’योमा …..
Prev७ तलाबाट हाम फाल्ने निखिल उप्रेती कहाँ के गर्दैछन् ? (भिडियोसहित)
Nextअब कामदार भिसामा पनि अमेरिका जान पाईने, “यसरी आफैं भर्नुहोस्”
रविको प्रश्न: चितवन घटनामा म विरुद्धको उजुरी काठमाण्डौमा लिन मिल्ने , सर्वेन्द्र खनालहरुको लिन नमिल्ने?
पशुपती शर्मा गाउँमै घाँस काट्दै, यस्तो छ अहिले उनको जीवन (हेर्नुहोस् भिडियो)
हास्य श्रृंखला ‘सक्किगोनि’ भुत बनेकी गरिमा शर्मा मिडियामा, छिन् धेरै सुन्दरी (भिडियो सहित)